Wararka - Tiknoolajiyadda wax iibiya (Zhejiang) Co., Ltd.
Maxay tahay inaad ka ogaato isticmaalka maaskaro
Looma adeegsan karo dadka oo dhan Qof kastaa kuma habboona inuu xirto waji duubis. Qaar ka mid ah kooxaha dadka, xijaabashada wejiga waxay ka sii dari kartaa xaaladaha jira oo xitaa nafta halis gelin kara. Sidaa darteed, waa inaan si cad u sheegnaa in sida ugu wanaagsan ee dadka noocaas ah ay tahay ......
Mashiinka xabagta dhalaalka kulul ayaa loo isticmaalaa warshadaha baakadaha cuntada
Maxaa mashiinka xabagta dhalaaliya ee kulul loo isticmaali karaa baakadaha cuntada? Sababta ugu weyn sababta oo ah xabagta dhalaalka kululaa waa mid aan sun lahayn oo aan dhadhan lahayn, taas oo hubin karta badqabka cuntada. Koollada dhalaalka kulul ayaa ku adag heerkulka qolka, kaliya waxay dib ugu......
Kala soocida dhegaha dhegta
Tiknoolajiyadda 'Purking Technology' ayaa soo koobaya qodobbada soo socda ee loogu talagalay kala soocidda maaskaro dhegaha: 1. Marka loo eego in dhego-beelka uu leeyahay dabacsanaanta, waxaa loo qaybiyaa: dhego-beelka jilicsan ee loo yaqaan 'earloop earloop' waxaa sidoo kale loo yaqaannaa xarig laa......
Sidee loo hagaajiyaa tayada alaabada koollada dhalaalaya?
Qaaciddada koollada dhalaalka kululaa ma aha mid joogto ah, oo qaar ka mid ah alaabta ceyriinka ah ayaa loo isticmaali karaa in lagu wanaajiyo tayada alaabada xabagta kulul ee dhalaalaya. 1. Ku darista ku habboon ee saliidaha ee koollada dhalaalka kulul waxay hagaajin kartaa waxqabadka sii deynta ee......
Ma taqaanaa faahfaahin yar oo maaskaro ah?
In kasta oo cudurka aafada ah ee dalkayga asal ahaan gacanta lagu hayo, shirkado badan ayaa wali si adag uga doonaya shaqaalaha inay xidhaan waji dabool markay shaqada tagayaan. Waan ku raacsanahay qaabkooda. Khibraddan ma leedahay?
Ka hadalka farqiga u dhexeeya mashiinka xabagta iyo mashiinka xabagta dhalaaliya ee kulul
Marka lagu daro warshadaha baakadaha, warshadaha dhismaha, warshadaha baabuurta, iwm waxay isticmaali doonaan makiinada xabagta kulul ee dhalaasha, mashiinka xabagta ayaa sidoo kale loo isticmaalaa inuu yahay qalab kaabayaal ah oo loogu talagalay wax soo saarka baakadaha, sidoo kale waa nooc ka mid ......